အရေပြား ယားယံတာ သက်သာစေဖို့ ဘာတွေ စားရမလဲ။ - Hello Sayarwon
အရေပြား ယားယံတာ သက်သာစေဖို့ ဘာတွေ စားရမလဲ။
အရေပြား ယားတာက တော်တော်လေး ခံရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အရေပြားက ယားတယ်။ ဆေးလည်း မသောက်ချင်ဘူး။ ဆေးလည်း မလူးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အရေပြားယားတာ သက်သာစေဖို့ ဘာတွေစားရမလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် ပြောပြပေးမယ်နော်။
အရေပြား ဘာကြောင့် ယား။
အရေပြားကို ယားယံစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ခုမက ရှိပါတယ်။
အစားအသောက်ကြောင့် အရေပြား ယားယံတာ
အရေပြားရောဂါ အမျိုးမျိုးကြောင့် အရေပြား ယားယံနိုင်ပါတယ်။
အရေပြား ယားယံတာကို သက်သာစေဖို့ ဒါတွေစားပေးပါ။
အရေပြား ယားယံရင် လူတော်တော်များများက အယား သက်သာအောင်ဆိုပြီး ကုတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒါက နည်းလမ်းကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကုတ်တာဖဲ့တာက အရေပြား ယားယံတာကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြား ယားယံတာကို သက်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ ရှိပါတယ်။ အရေပြား ယားယံတဲ့အခါ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C နဲ့ ဗီတာမင် E ပါတဲ့ အစားအစာတွေက ယားယံတာကို ကုတ်စရာ ဖဲ့စရာ မလိုဘဲ သိသိသာသာ သက်သာစေမှာပါ။
ဒီတော့ အရေပြား ယားယံတာကို သက်သာစေဖို့ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C နဲ့ ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ကို စားသုံးပေးဖို့လိုမှာပါ။
ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝတဲ့ အစာအုပ်စု
ဗီတာမင် E က ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝတာ​ကြောင့် အရေပြားကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ခြောက်သွေ့တာ၊ ယားယံတာ ထိခိုက်လွယ်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပြီး အရေပြား အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းလည်ပတ်မှု ကောင်းစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် E ပါဝင်တဲ့
သံလွင်ဆီ စတာတွေကို စားသုံးပေးပါ။
ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ အစာအုပ်စု
ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ တဲ့အခါ အရေပြား ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့တာ၊ အဖက်လန်တာ၊ ယားယံတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C က ကော်လာဂျင်လို့ ခေါ်တဲ့ ပရိုတင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒီ အာဟာရဓာတ်က အရေပြားကို ယားယံမှု ကင်းစေပြီး အမာရွတ်တွေ အမဲစက်တွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသားအရေ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတာတွေ စားပေးပါ။
ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝတဲ့ အစာအုပ်စု
ဗီတာမင် A က အရေပြား ကျန်းမာဖြစ်ပေးစေဖို့ အားဖြည့်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးပါ။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရေပြား ယားယံမှု ကင်းစေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းလှပစေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရေပြား ယားယံမှု ကင်းပြီး ကျန်းမာစေဖို့ ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝတဲ့
အသည်း စတာတွေကို စားသုံးပေးပါ။
Are There Foods That Relieve Itching? https://www.livestrong.com/article/329901-foods-that-relieve-itching/ Accessed Date 8 September 2020
Natural Remedies: Food Cures For Itchy Skin, Disease-Prevention and More! https://www.self.com/story/natural-remedies-food-cures-fo Accessed Date 8 September 2020
တက်တူး ထိုးပြီးချိန် အရေပြား ယားယံတာကို ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်မလဲ
လက်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောနေရချိန်မှာ အရေပြားကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်သင့်သလဲ
ဆန်ကပေးတဲ့ အသားအရေ လှပမှု